Ingabe i-Web 2.0 Design kufanele isulwe? | Martech Zone
NgeSonto, Novemba 25, 2007 NgoMgqibelo, Okthoba 18, 2014 Douglas Karr
U-Elliot Jay Amasheya abeka ukukhala kwempi ngabaqambi… shiya ukubukeka kwe-Web 2.0 futhi ulwe namakhasimende akho ayiphusha.
QAPHELA: Qiniseka ukuthi uvakashela Isayithi lika-Elliot, ukwakheka kuyamangalisa ngokuphelele.
Angivumelani no-Elliot ukuthi kufanele ichithwe. Ukusebenza emkhakheni wezokuMaketha, uyabona ukuthi kukhona ukucabanga komhlambi okufanele kwenziwe. Izinkampani zithanda Apple babe namaphakethe athile ajulile futhi abe nokulindela kobuhlakani bokuqamba obuhambisana nomkhiqizo wabo. Umthengi ulindele ukuthi imiklamo ehambisana nemikhiqizo ye-Apple, ukupakisha kanye nokumaketha kuzokonakalisa umhlaba omusha. (Ngaphandle kwezikhangiso ezingemuva ezimnyama ezinokukhanya okukhanyayo kolunye uhlangothi lwesikhulumi… ngicabanga ukuthi kubukeka kungenangqondo).
Zonke ezinye izinkampani zikulungele kakhulu ukulandela ukuhola. Njengoba imfashini ilandela izitayela, kanjalo nokwakhiwa. 'Umhlambi' uthokozela ubuhle obubonakalayo obunikeza inkomba yokuthi buhlobene nomkhuba noma ubuchwepheshe obuthile. Lapho ngithola uhlelo olusha njenge I-Mixx or I-rssHugger, ngaphambi kokuba ngikwazi ukungena kuhlelo lokusebenza, ngithintekile ngombono wokuthi lolu uhlelo lokusebenza olwakhiwe kubuchwepheshe obusha kakhulu.
Ubuntu nobuciko kubalulekile, kepha lapho wonke umuntu egqoke amabhulukwe omlenze webhuthi futhi uvela ngamabhodlela ezinsimbi, abantu bazobuza ngokushesha umqondo wakho wemfashini. Kulungile noma kungalungile, lokhu kungukuziphatha komuntu. Kulesi sikhathi samanje lapho abathengi basuka khona ngokushesha MySpace kuya Facebook, noma Twitter kuya Tumblr, kubalulekile ukuthi idizayini yakho ifake ukuthi wamukele okwakamuva fashion kuwebhu.
Ngiyawuhlonipha umbono ka-Elliot njengomculi onethalente nomklami oyingqayizivele, kepha ngincoma ukuthi izinkampani zingayilahli idizayini yeWeb 2.0 okwamanje. Ngisho no-Elliot uyavuma ukuthi kunezizathu ezizwakalayo zokulandela lo mhlambi. Mina no-Elliot siyavumelana ngenselelo yangempela: Ungasebenza kanjani ngaphakathi kwemingcele ye-Web 2.0 aesthetics bese uqhamuka ungowokuqala. Futhi uma ufuna ukuthi iziphi izinto ezibalulekile, u-Elliot uhlanganise isethulo esihle ngayo yonke i-aesthetics ehlotshaniswa nokuklanywa kweWeb 2.0!
Tags: amasheya elliot jayIwebhu ye-2Iwebhu ye-2.0design web
Nov 25, 2007 ngo-3: 50 PM
Umklami ojwayelekile we-myopic nokuzicabangela yena. Ngifunde okuthunyelwe kwakhe ngabe sengibuka inkulumo yakhe ngilindele ukuthola ukuqonda kwangempela kepha ngathola okuthunyelwe okushumayeza ikhwaya labalaleli bakhe be-FOWD; iqembu elinama-ethos ahlanganyelwe afuna ukuba nenkululeko yokudala ngaphandle kokukhathazeka ngezinhloso zebhizinisi. Okuxakayo ukuthi inguqulo yeWeb 2.0 ye-ejensi yezikhangiso egxile ekuzuzeni imiklomelo yokudala esikhundleni sokugxila ekushayeleni imali kulayini wekhasimende labo.
Ngizonaka kakhulu uJakob Nielsen futhi Umthetho kaNielsen: “Abantu basebenzisa iwebhusayithi yabanye abantu kaningi kakhulu kuneyakho (ngakho-ke ukwenza isiza sakho sihambisane namanye amasayithi kuzokhulisa ukusebenziseka futhi ngalokho kukusize kangcono ukufeza izinhloso zakho zebhizinisi.)
Nov 25, 2007 ngo-3: 51 PM
Bheka, inselelo ukuthi iningi labangewona abaklami lizenzela ngokwabo ukwakheka kwamasayithi .. Abanye bethu bangathanda ukukwazi ukuklama isiza esinjengoMnu.
Uma ukhuluma nge "Web 2.0", yebo akukhulunywa ngayo, kepha sonke siyaqonda ukubukeka: izinto ezicwebezelayo, imigqa, imiphetho ebunjiwe, ukucabanga, nokukhanya kwangaphandle… (ngicabanga ukuthi nazo zonke zimboziwe!) . Impela, wonke umuntu ugxumela ebhodini futhi uhamba ngokungahambi kahle nayo, kepha-ke, uma sibheka ezinye izindlela, sisele nezinhlanga ezinkulu zombala (okungenzeka noma zingasebenzi ndawonye), ukungabi nokujula okuphelele, futhi kudabukisa iWebdings noma okubi kakhulu, ubuciko bokuqopha…
Ukubukeka kwe-web 2.0 kungokwethu sonke esiqondayo ukuthi asinamakhono omklami omuhle impela, kepha siqonde ukubaluleka kokufaka umfutho kuwo ngaphandle kokushintsha umbhalo kutimu ezenzakalelayo ye-WordPress…
Nov 25, 2007 ngo-9: 02 PM
Enye yezinto ezinhle kakhulu i-aobut WordPress (ok. Mayelana ne-CSS) ukuthi ihlukanisa ukwakheka nokuqukethwe. Okusho ukuthi ungalanda itimu eklanywe kahle futhi ungakhathazeki ngokwakhiwa kakhulu ngemuva kwalokho.
Mina njengamanje ngizama ukuhamba ngendlela encane, futhi ngidlala ngokuzungeza ngengqikithi egxile kohlobo.
Nov 25, 2007 ngo-8: 58 PM
U-Elliot unesihloko esihle kunazo zonke, esicatshangelwe kakhulu nge-WordPress engihlangabezane naso. Kuyamangalisa futhi Kuyakhuthaza.
Nov 25, 2007 ngo-9: 20 PM
Ngiyavuma, modifoo! Nginamahloni kumklamo wami lapho ngibheka okuklanywe kahle njengokwakhe!